သီလဆောက်တည်ပြီးလျှင် ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်ကြ။ ဖြည့်လို့ ပြည့်စုံပြီဆိုလျှင် မိမိစိတ်အလို တောင့်တတဲ့အတိုင်း
ပြီးမယ်..။ယခုလဲ ချမ်းသာမယ်၊ နောင်လဲ ချမ်းသာမယ်..။ ပစ္စပ္ပန်ချမ်းသာ..သံသရာချမ်းသာ နှစ်ဖြာကို ပေးစွမ်း
နိုင်တာဟာ ဘုရားရှင့် အဆုံးအမတော်ကလွဲလို့..တခြားမရှိဘူး..။ ဘုရားရှင်ဆုံးအမဆိုတာ ပိဋကသုံးပုံဘဲ..။
ပိဋကသုံးပုံဆိုတာ အလွန်ကျယ်ဝန်းတယ်..။ပိဋကသုံးပုံကို အဆီထုတ်ပါဆိုလျှင် ဗောဓိပက္ခိယတရားသုံးဆယ်
ခုနှစ်ပါး ရတယ်..။ဗောဓိပက္ခိယတရားသုံးဆယ့်ခုနှစ်ပါးကို အဆီထုတ်လျှင် သိက္ခာသုံးပါးရတယ်..။
သိက္ခာသုံးပါးဆိုတာ အဓိသီလ၊အဓိစိတ္တ၊အဓိပညာပါဘဲ..။ သိက္ခာသုံးပါးကို အဆီထုတ်လျှင် ဧကောဓမ္မော .တရားတစ်ခုရတယ်..။ရုပ်ပေါ်နာမ်ပေါ်မှာနေပြီး ယခုလို ဆောင်ထားတော့ ကာယကံသောင်းကျန်းမှု၊၀စီကံ
သောင်းကျန်းမှုမရှိဘူး..အဲဒါ အဓီသီလလို့ခေါ်တယ်..။ အဓိသီလ အားကောင်းလျှင် စိတ်တွေသောင်းကျန်းမှု
မရှိဘဲ ငြိမ်ဝပ်ပိပြားပြီး တည်နေတော့တယ်..အဲဒါ အဓိစိတ္တခေါ်တယ်..။အဓိစိတ္တ(သမာဓိ)အားကောင်းလို့
အချိန်ကြာလျှင် ဘယ်လူ ဘယ်နတ် ဘယ်ဗြဟ္မာမှ ဖန်တီးလို့ မဖြစ်ဘူး။ လျှပ်တပြက်အတွင်း ကုဋေတစ်သိန်း ဖြစ်ပြီး ပျက်နေတယ်..။ရုပ်ကို နာမ်က သိနေလျှင် ဖြစ်ပျက်ကို သိတော့တာဘဲ..။ဖြစ်ပျက်ကို သိတာ အဓိပညာလို့ ခေါ်တယ်..။
အများနားလည်အောင် ပြောရမယ်ဆိုရင် ခန္ဓာကိုယ်မှာ ထင်ရှားတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ နှာဖျားနှာဝမှာ
ထွက်လေ ၀င်လေနှစ်ရပ်ဟာ အမြဲတိုက်ဝင် တိုက်ထွက်နေတယ်..။ နှာဖျားနှာဝမှာ ကာယပသာဒအကြည်က
အထိခံ၊ ထွက်လေ၀င်လေဖြစ်တဲ့ လေနှစ်ရပ် ၀ါယောဖောဌဗ္ဗက ထိတယ်၊ထိုအထိခံနဲ့ ထိတာကရုပ်၊ သိတာက
နာမ်ဆိုတော့၊ ဒကာကြီးတို့..ဒကာမကြီးတို့ သူများမမေးနဲ့၊ ကိုယ်နှာဝကို ဥာဏ်နဲ့ စောင့်ကြည့်၊၊ ၀င်တော့ထိ ၀င်မယ်၊ ထွက်တော့လဲ ထိထွက်မယ်၊ထိတာကိုသိလျှင်၊ သိနေလျှင် လောဘ ဒေါသ မောဟဖြစ်ခွင့်မရလို့ လောဘမီး ဒေါသမီး မောဟမီးငြိမ်းတယ်၊ ငြိမ်းတော့အေးတယ်..။
မထိခင်ကလဲ သိလို့မဖြစ်ဘူး၊ ထိပြီးပြန်တော့လဲ သိလို့မဖြစ်ဘူး။ ထိတုန်းကိုသာ သိလို့ဖြစ်တယ်၊ အဲဒါကို ပစ္စုပ္ပန် တည့်တည့်လို့ဆိုတယ်..အဲသလို တထိထဲ ထိနေတာကို တဆက်ထဲ သိနေအောင် ဆောင်ကြဗျာ..တစ်ရက် ၂၄ နာရီ တစပ်လောက်ရလျှင် အလွန်သိသာပါတယ်။ အဲဒီလို ထိတာကို မသိမှတ်နိုင်ရင် လျှပ်တပြက်အတွင်းတွင် ဘဲ ကုဋေတစ်သိန်း အကြွေးတင်သွားရောဗျာ..။ထိတာကို သိနေလျှင် ရုပ်နဲ့နာမ်သာ ရှိပါကလားလို့ သိလိမ့်မယ်..။ရုပ်နာမ်မှတပါး ငါ၊သူတပါး၊ယောက်ျား၊မိန်းမ မရှိဘူးဆိုတာ ဘုရားရှင်၏ တရားတော် အမှန်ပါလား လို့ ကိုယ့်ဟာကို သိလိမ့်မယ်။ သူများကို မေးနေဘို့မလိုဘူး၊ နှာဖျားနှာဝမှာ လေထိတာကို သိနေလျင်၊ ထိုအချိန် မှာ အတ္တဆိုတဲ့ကိုယ် မရှိဘူး။
ထိုသိနေတဲ့ အချိန်မှာ ဥာဏ်အမြင်စင်ကြယ်တယ်၊ သမ္မာဒိဌိဖြစ်တယ်၊ ထိတာကို သိနေတဲ့ အချိန်မှာ ရုပ်နာမ် မှတပါး ဘာမျှမရှိပါလားလို့ သိတာကို နာမ်ရုပ်ကို ပိုင်းခြားပြီး သိလို့ ...နာမရူပပရိစ္ဆေဒ..လို့ခေါ်တယ်..။
တထိထဲထိ၊ တသိထဲသိ နေလျှင် အတ္တစင်၍ ဥာဏ်အမြင်စင်ကြယ်တဲ့ အကျိုးရတယ်..။ ဒါဟာ တဒင်္ဂပဟာန်၊
ခဏအချိန်ကလေးမှာ ရတဲ့အကျိုး၊နဲတယ်လို့ မမှတ်ကြနဲ့၊ ကမ္မဌာန်းထိုင်ရတာများ ဘာမှလဲ မတွေ့ပေါင်၊ ဘာမှ လဲ မရပေါင်..လို့များ မမှတ်လိုက်ကြပါနဲ့..မြင်မြတ်တဲ့ဘ၀..၊ ဘုရားသာသနာနဲ့ ကြုံကြိုက်တဲ့အခါမှာ ဒီလို အကျုိး ထူးများ ရနိုင်တယ်၊စားဘို့သောက်ဘို့ အသာထားပြီး အထူးကြိုးစားကြ...ိုို
Posted by yankin at 9:09 AM No comments:
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်အခါက ဒါရုစီရအမည်ရှိသော ပရိဗိုဇ်တဦးသည် ဤနေရာ ပတ်ဝန်းကျင်၌ တရား အားထုတ်နေစဉ်၊သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတစ်ပါး ပွင့်တော်မူသည်ကို ကြားသိရပါသည်..။ သဗ္ဗညုတရွှေညာဏ်တော်ကို ရရှိသည့် ပုဂ္ဂိုလ်အား ဖူးတွေ့လိုသော စိတ်ဆန္ဒ၊ သံသရာမှ ကျွတ်လွတ်မှုလမ်းစဉ်ကို သိလိုသော စိတ်ဆန္ဒ၊ ပြင်းပြ ခိုင်မာစွာဖြစ်ပေါ်လာသည့်အတွက် ဒါရုစိရသည် သာဝတ္တိပြည်သို့ရောက်အောင် မိုင်ပေါင်းတစ်ထောင်ကျော် ခရီးကို လမ်းလျှောက်၍ သွားခဲ့ပါသည်..။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားနှင့် တွေ့ရှိခါ အကျွတ်တရားကို ရရှိပြီး ရဟန္တာဖြစ်ခဲ့ပါသည်..။
ဤအရပ်မှ နောက်ဖြစ်ရပ်တစ်ခုကတော့၊ပုဏ္ဏအမည်ရှိသော ကုန်သည်တစ်ဦးသည် သာဝတ္တိပြည်သို့ အလုပ်ကိစ္စ ဖြင့် သွားရောက်ခဲ့ရာမှာ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားနှင့် တွေ့ရှိခဲ့ပါသည်..။ ကုသိုလ်ကံကောင်းလှသည့်အတွက် ၀ိပဿနာ တရား ကျင့်စဉ်အားထုတ်နည်းကို ကျင့်ကြံအားထုတ်ခဲ့ရာ တရားလမ်းပေါ်မှာလျှင် မြန်စွာတိုးတက်ခဲ့ပါသည်..။
ကုန်ကူးလုပ်ငန်းဖြင့် ဆက်လက်အသက်မွေး ၀မ်းကြောင်းပြုနေစဉ် စိတ်ဆန္ဒဖြစ်ပေါ်လာတာကတော့ ဤအံ့သြဘွယ် ကောင်းလှသော..ဒုက္ခအပေါင်းမှ လွတ်မြောက်စေသော၊ သံသရာမှ လွတ်မြောက်စေသော၊ တရား ကမ္မဌာန်းနည်း နိဿယကို ငါ၏ ဇာတိမြို့ရွာ၌ မည်သူမျှ မသိကြပါဘူး။ ငါ၏ အရပ်သူ အရပ်သားများ ဤတရားကမ္မဌာန်းကို တတ်သိ အားထုတ်ကြလျှင် သူတို့လည်း ငါကဲ့သို့ အကျိုးကျေးဇူး ခံစားရပါလိမ့်မည်..။
Posted by yankin at 11:47 AM No comments:
(၂၀၀၆-ခုနှစ် မတ်လ ၁၉-ရက်နေ့တွင် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ မဟာစေတီတော်ကြီး၏ လိုဏ်ဂူတော်
အောက်တွင် ပထမဦးဆုံးအကြိမ် တစ်ရက် တရားစခန်းကို ကျင်းပခဲ့စဉ် ၀ိပဿနာယောဂီပေါင်း
၅၀၀၀-ခန့် စုပေါင်း တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်. တရားစခန်းကို ဆရာကြီး ဦးဂိုအင်ကာနှင့်မာတာကြီး
တို့ တက်ရောက်၍ တရားပြသခဲ့ပါသည်..။ အောက်ပါ စာပိုဒ်များမှာ တရားစခန်းအပြီးတွင် ယောဂီများ
အား ဆရာကြီး ဟောကြားခဲ့သော တရားဒေသနာမှ ထုတ်နုတ်ချက်ဖြစ်ပါသည်...)
ကျွန်ုပ်သည် ဤသို့များပြားလှစွာသော ၀ိပဿနာ မိသားစု အစုအဝေးကြီးကို တွေ့ရသည့်အတွက်
အလွန်တရာမျှ စိတ်ချမ်းမြေ့ရပါသည်။ အနာဂတ်တွင် ဤမဟာလိုဏ်ဂူကြီးအတွင်း၌ လူပေါင်း
ထောင်ပေါင်းများစွာ အတူတကွ တရားအားထုတ်ကြပါလိမ့်မည်..။ဤအနာဂါတ်ကို ကျွန်ုပ်၏ ရှေ့၌
ရိပ်ခနဲမြင်တွေ့ရပါသည်..။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားက "သမဂ္ဂါနံ တပေါ သုခေါ" -အတူတကွ စုပေါင်း
တရားအားထုတ်ခြင်းသည် စိတ်ချမ်းသာမှုကို ဖြစ်စေပါသည်ဟု ဟောကြားထားခဲ့ပါသည်...
ဤကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ မဟာစေတီတော်ကြီးထံသို့ လာရောက်သည့်အခါတိုင်း အကျွန်ုပ်သည် စိတ်
ပျော်ရွှင် ချမ်းမြေ့ရပါသည်..။ဤမြေသည် တရားအားထုတ်ဖို့အတွက်သာဖြစ်ပါသည်..။ဓမ္မသား
တစ်ဦးက ဤတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သော မြေကို လှုစဉ်အခါက၊ ဤမြေသည် ကမ္မဌာန်းမြေ ဖြစ်တယ်
ဆိုတာကို ကျွန်ုပ်စိတ်ထဲ၌ အသေအချာ အပြည့်အ၀ မဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါ...။
သို့သော် ဤနေရာသို့ ရောက်လာသည့်အခါတိုင်း ဤဖြူစင်သော မြေကွက်သည် ကမ္မဌာန်းအား
ထုတ်ရန် နေရာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ ယုံကြည်မှုသည် ပိုမိုကြီးထွားလာခဲ့ပါသည်..ဤအရပ်အနီး၌
သူတော်စင်များစွာတရားအားထုတ်ခဲ့ကြဘူးပါသည်..။ ဤနေရပ်သည် ကျွန်ုပ်တို့ အားလုံးကို စွဲ
ဆောင်ခဲ့ပါသည်..။ ဤနေရပ်၏ စွဲဆောင်မှုအားသည် ကြီးမားလှပါသည်...။
Posted by yankin at 1:54 AM No comments:
the pagoda of dhamma giri
surrounded by hundreds of meditation cells to do serious work in silence
From Mumbai I continued toalittle town called Igatpuri. Exactly in time to start the 10-days Vipassana meditation course I have had already registered for when I was in Bolivia.
In Igatpuri you find Dhamma-Giri - the seat of the Int. Vipassana Research Institute and biggest Vipassana-meditation center in the world.
Vipassana isanon-sectarian and non-religious meditation-technique discovered by Buddha. The technique was long lost in India but well preserved over generations in Burma, from where it got reintroduced to India by S.N. Goenka at the beginning of the 70's. This 10-day courses are donation-based and run by volunteers. Centers are spread all over the world today...
Inspired by my brother, who started to practice when he was in India about3years ago, I didacourse in Switzerland alreadyayear before. So I knew that it will be hard work - and it was.9out of 10 days without speaking, meditating the whole day long and not eating in the evening -achallenging task for everybody.
I struggled quiteabit, specially in the beginning, but it wasavery important and valueable time for me again! Rewarding in so many aspects... And also
the pagoda behind the trees
very special because it happened over christmas - no celebration, just meditation...
the gate to the huge area of dhamma-giri
welcome to dhamma giri
the big dhamma-gong
waking us up at 4:00 am every morning - time to meditate!
my little room (not meditation cell)
the pagoda in the evening
Posted by yankin at 1:33 AM No comments:
ညလဲနက်ပြီမို့ အိပ်မလို့ပြင်ကာမှ..ကွန်ပျူတာဖွင့်ခြင်စ်ိတ်ပေါက်တာနဲ့ ကွန်ပျူတာလေးကို ဖွင့်လိုက်တယ်.. ထုံးစံအတိုင်း ဘလောဂ်တွေဆီ လိုက်လယ်တယ်..လည်ရင်း လည်ရင်းနဲ့ ဆင်တဲကဖေး ရောက်သွားတယ်...(ဆင်တဲကဖေးက လဘက်ရည်လဲ အလကားတိုက်တယ်..ဟီး)..ရယ်စရာလေးတွေ ဖတ်ရလို့ တစ်ပါးတည်း အခန်းထဲမှာ ရယ်နေမိတယ်..ဟုတ်တယ်လေ..ဘယ်လိုဘဲဖြစ်ဖြစ် စာလေးဖတ်ပြီး စိတ်ကြည်နူးရလို့ ဆင်တဲကို ကျေးဇူးတင်နေမိတယ်..
ဆင်တဲကဖေး၏ စင်ကာပူမြေပေါ်မှအလွဲများ ဟာသထဲမှာ..စင်ကာပူမှာ မြန်မာမိန်းကလေးတစ်ယောက် ပြောပုံလေးက This is not your hot..This is my hot..တဲ့..ဒါ မင်းအပူ မဟုတ်ဘူး ..ငါ့အပူပေါ့တဲ့..နောက်ပြီးတော့လဲ...စင်ကာပူက စက်ရုံတစ်ခုမှာ မြန်မာလူမျိုးလေး ပြောပုံကလည်း..အင်း… now 2nd shift က i နဲ့two malaysia guy လေ။ နောက် night shift က two china guy နဲ့one malaysia guy လေတဲ့....သဘောကျလို့..ပါ ......
မှန်ပေသည်...သူတစ်ပါး စိတ်ဆိုး စိတ်ညစ်အောင် လုပ်တာထက်စာရင် ပျော်ရွှင်ကြည်နူးရအောင် ၀မ်းသာရအောင် လုပ်ပေးတာက ပိုကောင်းပါသည်..မိမိအပြုအမူကြောင့် သူတစ်ပါး စိတ်ကြည်နူးသွားရရင် ကိုယ်တိုင်လဲ ပီတိ ဖြစ်ရတယ်..သူတစ်ပါးလည်း ပျော်ရွှင်ရတယ်... ဘယ်လောက်ကောင်းလဲ...
အသင်ရော..ကျွန်ုပ်ရော..လောကကြီးကို ဘယ်လောက် ပျော်ရွှင်အောင် လုပ်ပေးပြီးပြီလဲ
Posted by yankin at 1:33 PM No comments:
အထုံဝါသနာကို စွန့်လွတ်နိုင်ခဲ၏..လူအမျိုးမျိုး ရှိသလိုလို ၀ါသနာအမျိုးမျိုး စရိုက်အမျိုးမျိုးရှိပေသည်.. စာဖတ်ဝါသနာပါသူ..ရုပ်ရှင်ကြည့်ဝါသနာပါသူ.ဟင်းချက်ဝါသနာပါသူ..သစ်ပင်စိုက်ဝါသနာပါသူ. ပိုကာဒေါင်းတာဝါသနာပါသူ..ခရီးသွားဝါသနာပါသူ..တစ်ချိုကျအ၀တ်အစားဖက်ရှင်ကျကျဝတ်ရတာ ၀ါသနာပါတယ်..ဤသို့ ၀ါသနာ..၀ါသနာဟူ၍ အမျိုး စုံလင်လှပေသည်..
မိမိဝါသနာပါတာလေးကို လုပ်နေရတော့ စိတ်ထဲမှာ လန်းလို့ ရွှင်လို့..စိုင်းထီးဆိုင်ဆိုသလို မောတော့ မောတာပေါ့..ဒါပေမဲ့ ..မမောပါဘူး...ဆိုသလဲဘဲ ၀ါသနာပါတာလေး လုပ်နေရတော့ စိတ်ထဲ ပင်ပန်းနေ ပေမဲ့..ပင်ပန်းတယ်လို့ မထင်ရဘူး..၀ါသနာပါတာကို...လုပ်နေတာ..အပြစ်ရယ်လို့ ပြောတာလဲ မဟုတ်ဘူး..၀ါသနာဟူသည် တစ်ချို့ကျပြန်တော့လည်း အသက်အရွယ်အလိုက် ၀ါသနာပြောင်းသည် ထင်ပါသည်..ငယ်ငယ်က shopingထွက်ရတာ ၀ါသနာပါပေမဲ့ အသက်အရွယ်လေး အတန် အသင့် ရောက်လာ တော့ သစ်ပင်စိုက်တာ ၀ါသနာပါလေသည်...ဘယ်လိုဘဲ ၀ါသနာပါပါ.. ကိုယ်ဝါသနာပါတာလေးတွေကို လုပ်ရင်း ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်အောင် မွေးမြူတတ်ဘို့လိုပါသည်..မိမိစိတ်လေးကို အလိုမလိုက်ဘဲ ကောင်းမွန်သော လမ်းကြောင်းပေါ်သို့ ရောက်အောင် မိမိကိုယ်တိုင်သာ ပို့ဆောင်ရပေမည်..သို့မှသာ မိမိစိတ်ငြိမ်းချမ်းရာ အစစ်သည် စစ်မှန်သော ငြိမ်းချမ်းမှုဖြစ်ပေမည်...
Posted by yankin at 8:39 AM No comments:
မနက်ခင်း အားနေတာနဲ့မို့ ကွန်ပျူတာလေး ဖွင့်ပြီး ထိုင်ကြည့်နေလိုက်တယ်..ဘာရယ်လို့ မဟုတ်ပေမဲ့..ကွန်ပျူတာထဲမှာ ရှိတဲ့..Talk It softwear အကူအညီလေးနဲ့ စာဖတ်ကြည့်အုံးမယ်ဆိုပြီး စမ်းဖွင့်မိတယ်..အမယ်..မဆိုးဘူးဗျ..အဲဒီ Talk It ထဲမှာ မိမိဖတ်ခြင်တဲ့ စာလေးရိုက်ထည့်..ရိုက်ပြီးရင် Talk Itဆိုတာလေး နှိပ်လိုက်..ဒီsoftwearလေးက အသံလေး ထွက်ပြီး ဖတ်ပေးတယ်..အရင်တွေ့ဘူးနေတာက words လေးတွေလောက် အသံထွက်ပေးတယ်..ဒါလေးကတော့ ၀ါကျလေးရောဖတ်ပြီး အသံထွက်ပေးတယ်ဆိုတော့ သဘောကျတယ်..တစ်ခါတည်း Reading skillရော listening skillရော ရသွားတယ်..နောက်ပြီး ဘောက်လေးထဲ ထည့်ရိုက်ရတော့ writting skillရော ရသွားတယ်..ကိုယ်သိတာလေးကို ပြောပြတာပါ..ဒီထက် ကောင်းတာလဲ ရှိခြင်ရှိနိုင်ပါတယ်..စမ်းသုံးကြည့်လေ..TalkItကို... သုံးကြည့်ခြင်တယ်ဆိုရင် ဒီဆိုက်http://talk-it.en.malavida.com/လေးမှာ ၀င်ဒေါင်းလိုက်...
Posted by yankin at 2:42 AM No comments:
ညနေ လေနုအေးသည်...အခန်းစီးကို ကြည်စယ်လှုပ်ခဲ့နေ၏..ယိမ်းယိမ်းလေး နွဲ့နေသော ခံစီးပုဝါလေးနဲ့
အတူ စိတ်သည်..လွင့်ပျန့်သွားလေသည်..နေ့ခင်းမှာလည်း စာတွေ့ကြည့်ဖြစ်ပါသည်..အတော်ကြာ
သည်အထိ တစ်ထိုင်တည်း ကြည့်မိသည်...မျက်စိညောင်းလာသဖြင့် ကုလားထိုင်မှာ ထကာ..
ဗီယက်နမ်ဘုန်းတော်ကြီးတစ်ပါး ဘုရား ရှိခိုးသံကြားရသဖြင့် ရင်ထဲ ကြည်နူးရပါသည်..ကိန်းဝပ်နေသော
ရင်ထဲက လိုခြင်မှုလောဘများ..မခံစားနိုင်သော အနိဌာရုံဒေါသဖြစ်စရာများ..နှလုံးသားအပူလှိုင်းများဖြင့်
တင်းမာနေသော စိတ်ကို အေးချမ်းစေအောင် ဘုရားတရားတော်များကို လိုက်နာခြင်းဖြင့် ဘ၀ကို ငြိမ်းချမ်း
အောင် လုပ်နိုင်ပေသည်...စစ်မှန်သော ငြိမ်းချမ်းမှုသည် ရင်ထဲတွင် ရှိပြီးသား...ထိုရှိပြီးသားကို ကိုယ်တိုင်
ဖေါ်ထုတ် စားသုံးနိုင်သော သူတော်ကောင်းများ ဖြစ်ကြဘို့သာ လိုပေသည်.....
Posted by yankin at 12:02 PM No comments:
မေတ္တာ ကရုဏာရှင် အလှူတော်
အကြောင်းအမျိုးကြောင့် ဆင်းရဲဒုက္ခ ရောက်နေသူများကို မေတ္တာ ဖြင့် စောင့်ရှောက်ခြင်း ကရုဏာဖြင့် ယုယခြင်း။ ပြည့်စုံသူတို့အား မုဒိတာပွားခြင်းတို့ သည် မြင့်မြတ်သော သူတော်သူမြတ်များ၏ လမ်းစဉ် ကျင့်စဉ် ဖြစ်သည်။
သူတဂူဆရာတော်ကြီး ဦးဆောင်သော သီတဂူတပည့်ဒကာ ဒကာမတို့သည် တစ်နေ့ တစ်နပ်စာ အစာအာဟာရ အလှူကြီးတစ်ခု ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်၊ မည်သူမဆို ပါဝင်လှူဒါန်းနိုင်ပါကြောင်း သီတဂူသာသနာပြုအဖွဲ့မှ ကြေငြာထားပါသည်။
အလှူခံ-------- အင်စိန်ထောင်သား (၈၀၀၀ ) ရှစ်ထောင်ကျော်။
နေ့ရက်------- ၁၃၇၂၊ ၀ါခေါင်လဆန်း (၁၁) ရက် (၂၁-၈-၂၀၁၀ စနေနေ့)။
သီတဂူ သာသနာပြုအဖွဲ့သို့ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
ဖုန်း--၀၁-၅၈၁၇၇၇။ ၅၈၁၉၉၉.....ဒီပို့စ်လေးကို သီတဂူစတားဆိုက်ကနေ ဖတ်ရတော့ ၀မ်းလဲသာမိတယ်..သူတော်ကောင်းကြီးတွေရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားကို လေးလဲ လေးစားမိတယ်..မြင်မြတ်သူတိုရဲ့ နှလုံးသားသည် မြင့်မြတ်သော စိတ်နေစိတ်ထားအပြည့်အ၀ ရှိနေပေသည်..မြင့်မြတ်သော အပြုအမှု မြင့်မြတ်သော လုပ်ဆောင်ချက်တို့သည် အတ္တအရေခွံ ခွါထားသော ပုဂ္ဂိုလ်တို့၌သာတွေ့မြင်ရပေသည်..သူလိုလူ သူလို ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကို အားကျကြည်ညိုအားကျမိပါ၏...မိမိမလုပ်ဆောင်နိုင်သောလည်း ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ကြီးတို့၏ လုပ်ဆောင်ချက်ကို မုဒိတာကုသိုလ်ယူမိပါသည်...
သူတစ်ထူးတို့ရဲ့ လိုအပ်နေသော အရာကို ဖြည့်ဆောင်ပေးတတ်သော သူတော်ကောင်းကြီးတို့အတွက် သူတို့မှာ လည်း အရာရာ ပြည့်ဝနေသည်မှာ အမှန်ပင်..
သူတစ်ပါး အကျိုးစီးပွားကို လိုလားတတ်သော မေတ္တာ..သူတစ်ထူး ဒုက္ခရောက်နေတာမြင်တော့ သနားတတ်သော ကရုဏာနှလုံးသားနှင့် ပြည့်စုံသော သီတဂူဆရာတော်အား ရှိခိုးဦးချလိုက်ပါသည်..သူလိုလူ ..သူလိုဆရာတော်မျိုး ..အမိမြန်မာပြည်၌ များများထွန်းကား ပေါ်ပေါက်ပါစေဟု လေးနက်စွာ ဆုတောင်းမိပေသည်...
Posted by yankin at 2:39 AM No comments:
မိုးလေးကလဲ ဖွဲဖွဲလေး..ရွာလိုက်..ရပ်လိုက်နဲ့...တောင်လေကလဲ ဖြူးဖြူးလေး..တိုက်နေတယ်..
မနက်မိုးလင်းလို့.. အိပ်ရာထထခြင်း အားလုံးကို မေတ္တာပို့လိုက်တယ်..တကယ် တစ်လောက
လုံးမှာရှိတဲ့ အနန္တသတ္တ၀ါတွေ ကျန်းမာ ချမ်းသာ လိုရာဆန္ဒပြည့်ဝပါစေ..ဒီနေ့ နေ့လည်စာ
ဆွမ်းအတွက် ဘာချက်ရမှန်းကို မသိ..ဘီရိုလေးထဲ တံခါးဖွင့် ကြည့်လိုက်တော့ ကြက်ဥတော့
အင်း..ဆီကလဲ ရှိပါသေးတယ်...မီးဖိုချောင်ကလဲ လူရှင်းတယ်..ဗီယက်နမ် မဟာယာန
ဘုန်းကြီးတွေ အိပ်တုန်းထင်ပါ့.. စဉ်းစား လိုက်ပါ အုံးမယ်လေ ဆိုပြီး အခန်းထဲ ၀င်ပြီး
ဘယ်မှာထောက်ပြစရာတွေ ရှိသေးလဲ..အဆက်အစပ် အချိတ် အဆက် တွေ မိရဲ့လားဆိုပြီးပေါ့..
အင်း...စာသင်ရတဲ့ ဒုက္ခက မကျွတ်သေးဘူး...သူများတွေလို လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပေါ့ပေါ့ပါးလေး
နေရတာ တစ်ခါတစ်လေအားကျပါရဲ့.(ဘယ်သူမှ စာသင်ခိုင်းနေတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး ...ဟဲဟဲ)
.ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် လက်ရှိရပ်တည်နေရတဲ့ ကိုယ့်အဖြစ်လေးကို တွေးရင် ရင်ထဲကျေနပ်ပါတယ်...
Posted by yankin at 1:53 AM No comments:
မဆိုးနဲ့နော်..သူ..ဆိုးရင်...ဒီက ဘယ်လိုလုပ်မလဲလို့..မနေတတ်ဘူး..ရင်ထဲမှာ... ၀မ်းနည်းတာတွေ.. စိတ်ဆင်း ရဲစရာတွေ..စိတ်ထဲ ကြာကြာသိမ်းမထားတတ်ဘူး..၀မ်းနည်းစရာတွေ ..စိတ်ဆင်းရဲစရာတွေ ရင်မှာအပြည့် သိမ်းထားရင်..ဒီစိတ်ကလေးက သနားစရာလေး ဖြစ်မှာပေါ့..စိတ်လေးမှာလဲ ခံစားတတ်တာပေါ့.. စိတ်ထဲခံစားရမှတော့ ..ဘယ်လို ကောင်းမလဲလို့..
ဤကား..မိမိကိုယ်ကို မိမိ စိတ်ကလေး..ကို သတိဖြင့် ထိမ်းကျောင်းရင်း ကလေးငယ်လေးပမာ ချော့မော့ ပြောပြ သတိပေးနေရလေသည်..မှန်လှပေသည်...
စိတ်ဆိုသည်မှာ..အပျော်အပါးတွေ ကြိုက်တတ်သမို့...ထိုအပျော်အပါးနောက်ကို..အကန့်အသတ်မရှိ လွှတ်ထား လေက.. သွားခြင်ရာကို သွားပြီး နောက်ဆုံး ပူပန်မှုတွေ ၀မ်းနည်းမှုတွေနဲ့ အဆုံးသတ်ရပေလ်ိမ့်မည်...၀မ်းသာမှု ဖြစ်ရလည်း ထို ၀မ်းသာပျော်ရွှင်ကြည်နူးမှုသည် သတိလက်လွတ်ခြေက နောက်ဆုံးရင်ခွင်သည်.. ၀မ်းနည်း မှု ပူဆွေးမှုတို့ဖြင့် အဆုံးသတ်ရပေသည်...
ထိုကြောင့်..မိမိစိတ်ကလေးကို မိမိ..မဆိုးနဲ့နော်..သူ..ဟု သတိလေးမွေးကာ ထိမ်းကျောင်းရပေမည်...
Posted by yankin at 8:46 AM No comments:
၀ါဆိုလပြည့်လေ..၀ါဆိုလပြည့်မှာ အမှတ်တရလေးတွေ စဉ်းစားမိတယ်..ယနေ့ ကြီးလာမှ ပြည့်တဲ့ ၀ါဆို လပြည့်နဲ့..ငယ်ငယ်က ၀ါဆိုလပြည့် ဘာများ ကွာသလဲလို့ စဉ်းစားမိတယ်..ငယ်ငယ်က ၀ါဆိုလပြည့်က အရမ်း ရင်ခုန်တယ်..စိတ်လှုပ်ရှားတယ်...ရင်မောခဲ့ဘူးတယ်..ဒီလို ၀ါဆိုလပြည့်မျိုးမှာ..သူပေါ်လာမှာကို မျှော်မိပေမဲ့.. တွေ့ရ မြင်ရ ကြားရမှာလဲ ရင်ထဲ တစ်မျိုးကြောက်တယ်..သူ မပေါ်လာရင်လဲ စိတ်ထဲ နောက်ကျလိုက်တာ ဆိုပြီး ကျွဲမီးတိုမိတယ်..
ဟုတ်တယ်လေ...သူက ဘ၀အတွက် အရေးအကြီးဆုံးမို့လား..သူလာမှဖြစ်မှာ..သူမလာလို့မဖြစ်ဘူး..ညည အတော်နဲ့ အိပ်မရဘူး..သူ့ကို တွေးမိတိုင်း ပျော်ရွင်သလိုလဲ ခံစားရတယ်..၀မ်းနည်တာတွေလဲ ခံစား ရတယ်..သူအကြောင်း...သူငယ်ချင်းတွေနဲ့လဲ ပြောတယ်..သူငယ်ချင်းတွေကလဲ ..သူ့ကို လေးစားကြ မြတ်နိုး ကြတယ်...ကိုယ့်လို့ဘဲ သူငယ်ချင်းတွေက သူ့ကို မျှော်ကြတယ်...ဒါပေမဲ့...သူငယ်ချင်းတွေလဲ သူ့ကို ရင်ဆိုင်ရမှာ..ကြောက်ကြတယ်...သူနဲ့ ပတ်သက်ရင် အားလုံးက ရင်ခုန်တယ်..သူ မလာဘူးဆိုရင် ဖုန်းလေး ဆက်ဆက်ပြီး စုံစမ်းကြရတာလဲ ငယ်ငယ်က ၀ါဆိုလပြည့်ရဲ့ ခံစားမှုလေးပေါ့..
သူနဲ့တွေ့ပြီးရင် ..သူ့အကြောင်းသိပြီးရင် ..သူငယ်ချင်းတွေ တစ်စု လဘက်ရည်ဆိုင်မှာ ထိုင်ကြမယ်.. ပျော်ပျော်ပါးပါးကြီး နွဲကြမယ်..ပြောပြောပြီး ရင်ခုန်ကြရတာ အမောပေါ့...တစ်ချို့ဆို ရွာက အမေကိုတောင် သွားပြောမတဲ့...အမေပျော်ရအောင်...စိတ်ချမ်းသာရအောင်လို့ပေါ့..ကိုယ်က ..အမေတော့ ..သွားမတွေ့ပါဘူး.. (ရွာသွားစရာ ကားခမရှိလို့) သူနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ..အမေ၀မ်းသာရအောင်..စာရေးပေးမယ်...အမေကလဲ ..သူ့ဆီကအကြောင်း ..သိရရင် စာလေးတော့ ရေးအုံးလို့..နွေရာသီ ရွာပြန်တုံးက အမေက မှာလိုက်တယ်..အင်း ..သူရယ်..မောလိုက်တာ..သူ့ဆီက..၀မ်းသာစရာလေး ကြားရပါစေလို့ဘဲ ဆုချွေရတော့မှာပေါ့.. သူ..... သိပ်သိပ်လွှမ်းမိုးတာဘဲ...
အင်း...ခုလိုတွေ ဆိုနေလို့...တစ်မျိုးမထင်ပါနဲ့...ငယ်ငယ်က အစိုးရစာမေးပွဲ ဂေဇက်က ဒီရက် ၀ါဆိုလပြည့် နားမှာထွက်တာလေ..အဲဒီဂေဇက်ကို ပြောတာပါ...အဲဒါကို ပြောတာပါ....ဟီ..ဟိ
Posted by yankin at 8:14 AM No comments:
Posted by yankin at 7:19 AM No comments: